China Architecture tambo mesh fekitori nevatengesi | Gepair mesh
Architecture tambo mesh
Stainless Simbi yekuvaka tambo mesh iri pachena uye ine hunyanzvi, mesh inogona kushandiswa mune ese marudzi ekushandisa kusanganisira balustrade pamabhiriji uye masitepisi, inoshanduka zoo enclosures, aviary mesh, hombe barriers fenzi, uye kuvaka façade trellis system nezvimwe.
Stainless simbi yekuvaka tambo mesh inoshandiswa zvakanyanya kuita senge yakanakisa yezvivakwa zvinhu zvine kuchengetedzeka zvinhu sechinhu chakakosha pakuita kwakakwana sechinhu chekuvaka, Kupfuura zvimwe, nekuda kwekuwonekera kwavo kwakanyanya, isimbi yesimbi tambo uye meshes zvakaringana mukuonekwa kwese. Kuvaka zviri nyore, kana yakamhara kana yakatwasuka, inokwanisa kuchinjika isingadzivisiki kune chimiro chaunoda munharaunda icho chinofanirwa kuchengetedzwa.
Stainless simbi tambo mesh inopa dzakasiyana mikana yekushandiswa mukuvaka uye mukati memukati dhizaini, akasiyana diameter uye inoshanduka mesh saizi inobvumira tauro yakagadzirwa mhinduro.
Stainless simbi yekuvaka tambo mesh maitiro
1. Rakareba, rakakwirira simba, rakareba, rakanaka kupfava uye kupera simba, kurwisa kukanganiswa, hombe yekumedura simba, hwakaumbwa hwese hwakasimba uye dura ble, hupenyu hwebasa mumakore anopfuura makumi mashanu.
2. Kujeka kwemaonero, chitarisiko chakasarudzika, yemaitiro emhando, inogona kuve yakabatanidzwa nenzvimbo dzakatenderedza, padhuze nechisikirwo, chengetedzo yakasvibira yemusango, ine yakanaka kwazvo yekushongedza uye inodzivirira.
3. Pamwe haidi chero kugadziriswa, uye inogona kushandiswa zvakare.
4. Flexible stainless simbi mesh, inobvumira maviri-mativi uye matatu-mativi maumbirwo, akasiyana-siyana waya diameter, gomba masizi uye epasi masaizi anogona kuve akagadzirirwa kusangana nechako chaunoda.
Yepfuura: Flexible simbi isina tambo tambo mesh (yakaomeswa rudzi
Inotevera: Isina simbi yakasvibirira madziro mesh